မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီကို ပိတ်သိမ်းဖို့ တရုတ် အမိန့်ထုတ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီကို ပိတ်သိမ်းဖို့ တရုတ် အမိန့်ထုတ်
(FILES) This file picture taken on September 5, 2017 shows trucks waiting in the Chinese border city of Dandong, in China's northeast Liaoning province, before crossing the Friendship Bridge to the North Korean town of Sinuiju. China has ordered North Korean companies in the country to shut down by January as it applies UN sanctions imposed following Pyongyang's sixth nuclear test, the commerce ministry said on September 28, 2017. / AFP PHOTO / GREG BAKER
မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီကို ပိတ်သိမ်းဖို့ တရုတ် အမိန့်ထုတ်
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအပေါ် ကုလသမဂ္ဂက ပိတ်ဆို့မှုချထားကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတွေကို ပိတ်သိမ်းဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတွေဟာ ဇန်နဝါရီလက စတင်ပြီး ပိတ်သိမ်းရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အဓိက မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအပေါ် အထည်အလိပ် တင်ပို့တာ ပိတ်ပင်မှုနဲ့ ရေနံကို အကန့်သတ်နဲ့ တင်ပို့ဖို့ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံအတွင်းက မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီကို ပိတ်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားကို နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး အထီးကျန်ဖြစ်စေဖို့ ပိတ်ဆိုမှုတွေ လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအတွက် ထိုးနှက်ချက်တွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
မွောကျကိုရီးယား ကုမ်ပဏီကို ပိတျသိမျးဖို့ တရုတျ အမိနျ့ထုတျ
မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံအပျေါ ကုလသမဂ်ဂက ပိတျဆို့မှုခထြားကို အကောငျထညျဖျောနိုငျဖို့ တရုတျနိုငျငံဟာ နိုငျငံမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ လုပျနတေဲ့ မွောကျကိုရီးယား ကုမ်ပဏီတှကေို ပိတျသိမျးဖို့ အမိနျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
မွောကျကိုရီးယား ကုမ်ပဏီတှဟော ဇနျနဝါရီလက စတငျပွီး ပိတျသိမျးရဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ တရုတျနိုငျငံဟာ မွောကျကိုရီးယားရဲ့ အဓိက မဟာမိတျနိုငျငံဖွဈပမေယျ့ မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံအပျေါ အထညျအလိပျ တငျပို့တာ ပိတျပငျမှုနဲ့ ရနေံကို အကနျ့သတျနဲ့ တငျပို့ဖို့ လုပျဆောငျထားပါတယျ။
တရုတျ ကုနျသှယျရေးဝနျကွီးက နိုငျငံအတှငျးက မွောကျကိုရီးယား ကုမ်ပဏီကို ပိတျဖို့ ညှနျကွားခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ မွောကျကိုရီးယားကို နိုငျငံရေးနဲ့ စီးပှားရေး အထီးကနျြဖွဈစဖေို့ ပိတျဆိုမှုတှေ လုပျနတောဖွဈပွီး တရုတျနိုငျငံဟာ မွောကျကိုရီးယားရဲ့ အဓိက ကုနျသှယျဖကျဖွဈလို့ မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံအတှကျ ထိုးနှကျခကျြတှေ ဖွဈလာစပေါတယျ။
Previous articleကစားသမားတွေ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ နည်းပြ ကိုးလ်မန်းပြော
Next articleအီဖယ်လ် မျှော်စင်ကို လာရောက်လည်ပတ်သူ သန်း ၃၀၀ာ ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ